Sidee u sameeyaa lacag wareejin / xawaalad dirid? – Transfer Galaxy
Sameynta lacag wareejinta / xawaalad dirida
Sidee u sameeyaa lacag wareejin / xawaalad dirid?
Sameynta lacag wareejinta / Xawaalada waa mid sahlan waxaana lagu sameyn karaa 3 talaabo oo fudud.
1. Dooro lacag qaataha: Waxaad ku dari kartaa lacag qaate adigoo ku qoraya faahfaahintiisa aasaasiga ah sida magaca, cinwaanka, lambarka taleefanka iyo wadanka. Marka dambe ee aad sameyneyso lacag wareejin waxaad ka heli kartaa qofka meesha hoos timaada lacag qaatayaasha hore.
2. Dooro wadan, adeegga iyo qiimaha: Dooro wadanka aad rabto inaad lacag u dirto, nooca adeegga (Tusaale ahaan, lacag wareejin /xawaalada taleefanka gacanta ah ama lacag kaash / gacan ku qaadasho ah) iyo inta aad rabto inaad dirto. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto inta kharashka aynu kaa rabno iyo sarifka lacagta ee dhabta ah oo si cad loo soo bandhigay.
3. Kharash Bixinta: Waxaad dooran kartaa inaad ku bixiso kharashka kaarka amaahda / kaarka bangiga ama kharash bixinta bangiga ee tooska ah.
Haddii aad doorato adeegga ah lacag qaadasho kaash ah / gacan ku qaadasho ah, labadiinaba adiga iyo lacag qaatahaaga ayaa ku helaya ogeysiisyo qoraal ahaan marka lacagta ay diyaar u tahay in la qaato. Waxaad sidoo kale ku heli doontaa ogeysiis e-mailka marka lacagta la diro iyo la qaato.